Ngemva kokungawutholi umsebenzi awufundela, wafikelwa wumcabango webhizinisini ezishisela inyama osedayisa ngamalahle. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uGiven Ngwamba, osenebhizinisi lokudayisa amalahle okushisa inyama, ngemva kokwethweswa iziqu ze-sound engineering ngo-2006, wawufuna wancama umsebenzi. Kwathi ngelinye ilanga eshisa inyama, wafikelwa wumcabango webhizinisini ngenkathi ebuka amalahle okosa.
Namhlanje sekuwumlando ukuthi uwumphathi weNdzilo Charcoal Briquettes, ibhizinisi aliqala ngo-2019.
Amalahle eNdzilo Charcoal
Echaza ngokungena kwakhe kuleli bhizinisi, uthi wayesekhathele ukuba wumahlalela, wase ebona kukuhle ukuthi aziqalele ibhizinisi elizomenza akwazi ukuziphilisa.
Uthi ngaphambi kokusungula iNdzilo Charcoal Briquettes wake wazama ukuqala isiteshi somsakazo esi-online kodwa wabona ukuthi ngeke kube lula ngenxa yokubiza kwe-data, okwakuzoba nzima ebantwini basemakhaya.
“Ngenza ucwaningo, ngathola ukuthi amalahle enziwa ngendlela ejwayelekile awekho ezingeni elifanele. Emva kwaloko, ngathola indlela esezingeni elicokeme yokuwenza,” kusho yena.
Echaza indlela enza ngayo amalahle akhe, uthi uhlanganisa izinhlobo zikadoti ohlukene bese kuphuma uhlobo lwelahle alifunayo. Uhlobo lwamalahle alukhiqizayo uthi alwenzi intuthu eningi njengamalahle ejwayelekile.
Amalahle eNdzilo Charcoal adle ngokuhluka kwamanye
Ezintweni azisebenzisa ukwenza amalahle akhe ubale amakinati angathosiwe, izibi zezihlahla zikabhanana, isihlahla sikamango nezinhlamvu zommbila.
Konke lokhu ukwenza ebambisene nethimba lezisebenzi zakhe ezintathu, besebenzisa imishini emihlanu yokukhiqiza lamalahle azikhandela yona.
“Ngahlangana nomuntu owenza umsebenzi wokushisela, sahlanganisa amakhanda sakha le mishini. Isizathu sokwenza loku yingoba ngangingenayo imali yokuthenga imishini futhi ngingenanhliziyo yokulinda ukuxhaswa,” kusho uMnu uNgwamba, ophakela uPick n Pay eNkomazi, eMpumalanga.
“Sabathinta, senza izethulo zethu kubona. Emva kwaloko kwalunga. Abantu bacabanga ukuthi ukukwazi nokusebenzisana nezitolo ezifana nePick n Pay yinto ethusayo, abangeke bakwazi ukuyenza.
“Ngikufanisa nokuhlangana nomuntu othi umbuka umcabangele okungekuhle bese uthola ukuthi lowo muntu ulunge ukwedlula bonke abantu osake wahlangana nabo,” kusho uNgwamba.
Uthi uzimisele ukuqhubeka nokusebenza kanzima ukuze agcine esesebenzisana nezinye izitolo eMpumalanga yonkana.
Uthi selokhu aqala uhambo lwakhe lwebhizinisi kukhona asekufundile, njengokubaluleka kwesikhathi, ukulinda, ukuzithoba nokwethembeka kukho konke okwenzayo.
“Nokuthi-ke akumele uvumele impumelelo ikubuse futhi akumele wenze izinto ngendlela engagcina ikulahlekisela okukhona ngokungekho,” kuphetha uNgwamba.